MAQAAL: DAWLADAHA CAALAMKA OO LEH GAALO IYO MUSLINBA KULANKOODII OO QIRAY HORMARKA DAWLADA SOOMAALIYA - Latest News Updates
MAQAAL: DAWLADAHA CAALAMKA OO LEH GAALO IYO MUSLINBA KULANKOODII OO QIRAY HORMARKA DAWLADA SOOMAALIYA
Karaamadii umada Soomaaliyeed oo soonoqotay,taasoo gaartay caalamka dhexdiisa heer quudhsi iyo liidasho midka ugu xun caalamka laga soo bilaabo burburkii dawlad nimo 1991-2016 kii. waxaana umada soomaaliyeed loo quudhsaday markay noqdeen,isuma taliso,markay noqdeen kuwo aan ka naxayn dalkooda,dadkooda iyo diintooda.markii dalkii soomaaliya noqday hooy argagixiso,hooy dadka lagu xasuuqo,hooy calaad joogta ah,hooy ka caagan dawladnimada iyo nidaamka iyo kala danbaynta,hooy macaluusha iyo baryada joogtada ah,hooyga gaajada,macaluusha iyo dawo la aanta,hooy madaxdii u dhalataa badankoodu noqdeen kuwo lacag dhaafsada dalkooda oo dadkooda khiyaamay, intaa iyo kabadan markii caalamku arkay oo hubsaday ayaa keentay in laga aamin baxo oo la quursado si dad loo liido heerka uugu xun abid ee ugu hooseeya.
Waxaan oganahay in caalamka shucuubta iyo dawladaha aduunku ku maah maahaan “Dalkeena marabno in uu noqdo soomaaliya oo kale” wax kastoo la dareemo in ay dawlad diid tahay ama fawdo wado ayaa loogu maah maahaa soomaali. tusaale xun baan noqonay iyo dal iyo dad aan jirin. dad qabiil qabiil ukala jooga oo nin waliba calan yar meel kataagtay,oo diidan dawladnimo iyo midnimo soomaaliyeed oo ku midaysan haldawlad oo qura. Aduunka dawladaa soo jeediyay si dadban iyo si toos ahba in dalkaan lagu kala daro wadamada dariska oo hore qaybo kamid ah soomaaliya loo siiyay in intan hartayna lakala raacsho maadama aysan noqon karin dawlad iyo dad ismaamuli kara oo qaran ah.
Inagoo xaalkeenu sidaa yahay, nin gabyaa ah oo soomaali ah ayaa hore u yiri “MAR UNBAA CURADO KHAYR QABOO NOO KACA LA ARKI DOONAAYE” Ragii raga ahaa iyo darwiishku markuu gaalo hortaagnaa ayay ahayd oo dalkeena u diideen in ay guumaystaan.maxaa dhacay weeye hadaba.
Ilaahay wuxuu inoo kiciyay rag dhan walba ka dhisan,geesiyaal ah wadani ah,kadib doorashadii iyo curashadii lagu caleemo saaray Madaxweeyne Muxamed bin cabdullahi farmaajo,oo markiiba inoo dooray wadaniga weyn ee soomaali bilay xafidu llaahu raysal wasaare Khayre. Markiiba khyare waxa uu dhisay xukuumad tayo leh oo ay kamid yihiin rag xidigo ah sida raysal wasaare ku xigeenka mahad,wasiirkeena maaliyada dr bayle, wasiirka arimaha dibada cawad kuli waa xidigo tanoo dhashay in ay dalkeena ka sameeyaan hormar dagdag ah dhan walba.
Waxay mudo yar hanteen amaankii dalkeena,waxayna gacan bir ah ku qabteen amaanka muhiimada u wayna siiyeen. waxay la dagaalameen musuqmaasuqii ragaadiyay dhaqalaha dalkeena soo gala canshuur iyo deeqba in cidi farqaha isaga shubato oo khasnadihii dawladu marnaadaan siday dawladaani dhaxashayba, maxaayeelay xunkii xumaayo illaahay soomaali dhaafshay xasan sheekh oo dalkiiba ka dhigay shirkad ganaacsi oo uu leeyahay waxkastoo soogalayna dalkeena lun saday tanoo soomaali ku reebtay jab iyo murugo mahadho ah, oo keentay in caalamkii ka cararo soomaaliya oo la aamini waayo masuul soomaaliyeed.
Dawladeenu waxay caalamkii u dhigtay cashar cusub, waxaa la arkay nidaam iyo aqoon iyo kala danbayn dawladnimo oo buuxda rag ku dhaqmaaya. waxaa la arkay rag dalkooda difaacaya iska diidaya gumaysi iyo in ay dalkooda iibsadaan lacag ku badashaan sidii xunkii xasan ee meesha baneeyay iyo kuwii lamidka ahaa. waxa la arkay khasnadii dawlada soomaaliyeed oo buuxda kayd u yaalo dawlada,waxaa la arkay shaqaalihii iyo ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed oo nin walbaa helo mushaharkiisa oo joogta ah bilwalba. dad hanleh oo hami sare leh oo qableh oo soomaali ah oo dalkooda jecel ayaa la arkay kadib maxaa dhacay weeye wax is waydiintu?
Aduunyadii waxay ogaatay in ay khaldantay,oo ay jiraan shaqsi xun oo soomaali ah balse aysan jirin in bulshada soomaaliyeed oo dhan wada xuntahay oo ay iibsanayaa dalkooda hadafkooduna yahay uun doolar. Gobonimada madaxda qaranka dawladeena ayay layaabeen kadibna shir ay shalay ku kulmeen golaha amaanka aduunka ee jamciyada quruumaha ka dhaxaysa ayaa bayaan iyo qoraalo taariikhi ah oo ay soo saareen ku qiray kuna bogaadiyay,dadaalka ay dawlada fadaraalka ee soomaaliyeed ka gaartay nidaamka dawlad wanaaga, la dagaalanka musuqmaasuqa,soo uruurinta canshuuraha iyo maaraynta dakhliga dalka,tanoo ay dawladu ka gaartay heer aad u sareeya caalamkuna ku qancay kana maqsuuday.
Waa barbiloow aad u wanaagsan iyo hormar guul u ah hanaanka dawladnimo ee soomaaliya. waxaa xusid mudan dadka soomaaliyeed nin dawladan taageersan iyo nin ka soo horjeedaba maanta in caalamkii qiray hormarka dawladeena markii koobaad laga soobilaabo 1991-2019. wax dhacay maha maanta kahor sharafkaana waxaa leh dawladeena uu hogaaminaayo madaxweyne farmaajo oo ah hogaamiye daacad ah illaahayna garabkiisa galay oo cid hor istaagi kartaa jirin gaalo iyo muslinba,maxaayeelay hogaamiyaha daacada ah ilaahay baa balan qaaday in uu lajiraayo.
Waxa maanta aduunkii oo dhan qirsan yahay wanaaga dawladeena,waxaase xaasidaya kuwo mucaarad ku gabada oo ah dawladiid iyo kuwo kamasayrsan madaxweyne farmaajo oo leh sidee isagu heerkaan ku gaari karaa,kuwan oo ah dad aduunkana ku dulaysan aakhirana cadaabdaran sugaayo munaafaqnimadooda.
Waalawada arkaa dawladnimada soomaaliyeed ee hana qaaday,waxayna dan u tahay umada soomaaliyeed oo dhan dadkeena iyo dalkeena. sharaf weeye dawladnimadu iyo nolol inaga wada dhaxaysa oo ay waajib tahay in aan ilaashano. xeerkuna waxaa weeye hal dad isku diin isku af isku isir isku dal lamana kala qaybin karo. waxaan leenahay hal caasimad,hal madaxweeyne hal calan hal dawlad waxaanu nahay inagu soomaali. wixii intaa kabadalan waa fikir qabiilayste iyo gumayste u shaqeeye loomana baahna kaas.
Halkan waa sawir Geesiga soomaaliyeed Raysal wasaaraheena wadaniyiinta soomaaliyeed jecelyihiin Mudane Khayre oo caalamka ka dhaadhiciyay tubta siyaasada soomaaliya iyo in aan cidina isku dayin in ay burburka iyo dhabaatada soomaaliya ka jirta uuga faa iidaysan danaheeda gaarka taasoo aanaan sinaba u aqbali karayn.hadalo taariikhda galay ayuu ka jeediyay jamciyada quruumaha ka dhaxaysa ee fadhigoodu yahay New york u.s.a .
Waxa uu raysal wasaaraheenu maanka ku hayaa oo uu tiigsanayaa in dalkeena soomaaliya,noqdo mid nabad ah leh dawlad iyo kala danbayn kabaxa shaqala aanta iyo fakhriga gaara hormar kadibna dhawaan aduunku cidwalbaa usoo shaqo tagto dadka soomaaliyeedna ku noolaadaan nolol saraysa oo xushmad leh.
Waxaan koo hangoolinayaa maqalkan kooban,maxaa inala gudboon soomaaliyeey? waxaa inala gudboon sadex arimood oo kala ah 1. in aan illaahay umadah celinaa dawladnimadaa uu ina siiyay
2. in aan iska qabanaa kuwa mucaaradka sheeganaaya oo gumaysiga u adeegaaya iyo dollar ay helaa oo kaliya
3. in shacab iyo dawlad aan isku duubnaano ilaashano dawladnimadeena dhisano dalkeena si soomaali u noolaato cadawgeeduna u jabo.